Macalin hore ee kooxda Real Madrid ah oo si kulul u weeraray xidiga reer Brazil ee Neymar Jr – Gool FM
Macalin hore ee kooxda Real Madrid ah oo si kulul u weeraray xidiga reer Brazil ee Neymar Jr
Dajiye May 7, 2019
(Yurub) 07 Maajo 2019. Xiddiga reer Brazil iyo kooxda Paris Saint – Germain ee Neymar Jr ayaa wali kala kulmaya dhaleeceeno xoogan shaqsiyaadka qaar ee muhiimka ka ah kubadda cagta, sababa la xiriira dabacadihiisa oo mararka qaar dhaliya muran xoogan.
Macalinkii hore kooxda Real Madrid ee Vanderlei Luxemburgo ayaa markan si xoogan u weeraray ciyaaryahanka kooxda Paris Saint – Germain ee Neymar Jr, inkastoo uu tababare ugu soo noqday kooxda Santos ee dalka Brazil, kahor inta uusan u dhaqaaqin Barcelona.
Hadaba Luxemburgo ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay wuxuu si kulul ugu weeraray ciyaaryahanka ugu qaalisan taariikhda kubadda cagta aduunka ee Neymar Jr wuxuuna yiri:
“Neymar Jr wuxuu ilaabay inuu yahay ciyaaryahan kubadda cagta ku xamaasha, kubadda cagta waa inaad la sheekeysataa tababaraha, balse hadii aan runta ka hadalno Neymar ma ahan kaliya inuu ilaaliyo macalimiinta, balse sidoo kale waa inuu dhowraa maamulka iyo saxaafada laftigooda, maadaama uu si kale ula dhaqmo”.
Intaas kadib Luxemburgo ayaa ka hadlay xaalada Neymar Jr ee xulkiisa qaranka Brazil kahor inta uusan bilaaban tartanka Copa America wuxuuna yiri:
“Waxaan u maleynayaa in hab dhaqanka Neymar Jr ee xulkiisa qaranka Brazil, kaddib guuldaradii koobka aduunka 2018 aysan lahayn wax faa’iido leh, waxaan luminaa nuxurka kubadda cagta, waana inaan ka tagnaa fahamkeena kubada cagta”.
“Uma dabaal dagi doono sida todobaadkii hore, haddii aan gool ku dhaliyo Anfield.”. - Suarez
Kooxaha Arsenal iyo Tottenham oo si adag ugu dagaalamaya saxiixa xidig ka tirsan Ajax